AFARTII WIIL EE BAXSADKA AHAA! Sheeko | Sahalsoftware Saaxiib Joogta ah ka dhigo: Gacmo Wada Jir Bay Wax Ku Qabtaan, Si Waxbarashadan Bilaashka ah aan u sii wadi karno, Fadlan nagu caawi inaan Online ahaano, Hal doolar, 10 Doolar, 100 Doolar iyo IWM, ku dir: ZAAD Merchant : 421880, Ama AMAL BANK noogu soo dir akoonkan: 1011696150
Kolkuu dhegawayne indhaha is geliyey, waxaa usoo baxdey isagoo dhex taagan balligii uu ku dabbaalan jirey caruur nimadiisii. Hareertiisa waxaa taagnaa aabihii Gurxan iyo abtigii Salowle. Balliga waxaa biyo ka dhaansanaya dad aanu waligii arag. Intey soo eegeen ayey u sheegeen inaanu maantey ka danboow marti ahayn, kadibna labadoodii iyagoon isla hadlin ayey dhaqaaqeen.
“Dhegawayne, ka toos hurdada” ayuu ka war helay. Intuu indhaha marmartey ayuu ruqaansadey isagoo wali maskaxdiisa ay ka guuxayso wixii uu manaamka ku arkey, waxaa si gooniya uga yaabisey, aabihii iyo abtigii oo dhowr sano kahor dagaal ay aadeen lagu laayey inuu ku riyoodo. Wuxuu jeclaystey inuu helo qof u fasira riyadii ka fajacisey. Halkii ayey socodkoodii kasii wateen ilaa ay qorraxdii ku libidhey godkeedii, dayaxiina uu soo dhalaaley isagoon iftiinkiisii kala dhantaallayn. Waxaa mar qura istaagey sheekadii iyo kaftankii ay is dhaafsanayeen. daalka iyo cabsida haysa aawadeed.
Waxay hayaan dariiqa iyagoo midba midka kale uu ka dambeeyo, waxaa u horeeya Saleebaan oo tallaabada tuuraya iyo Yoonis oo isna taagsanaya, dhegawayne ayaa soo seddexeeya oo wadada ka haysta dhanka midig, xabeebna wuu ugu danbeeyaa oo wuxuu ku joogaa raadka labada kale. Wax socota ah oo maantoo idil ka hor ama daba yimi ma jiraan.
“Alla waxbaan ku istaagey” ayuu dhegawayne kor ugu qeyliyey. Ifka dayaxa 14aad ka ah ayaa nuuriyey dhulkoo idil. Afartoodiiba markey usoo dhowaadeen halkuu farta ku fiiqaayey dhegawayne, mase waa jilbis madow oo intuu is duubey barkadey qaarkiisa danbe. Wuxuu sameenayaa guux aaney waligood hadda ka hor maqal, mindhaa ciil iyo cadho ayuu afka ka xumbaynayaa. Markiiba dhegawayne waxaa cuncuntey lugta midigta ah, waqti aan badnayn kadibna, waxay bilowdey kaar illaa uu lugta dhulka ku xejin waayey. Cidna umaanu sheegin, oo wuxuu qiyaasayey iney magaaladii dhowdahay. Xoogaa haddii ay socdeen, dhegawayne xanuunkii wuu kusoo siyaadey, wuxuu bilaabey wareer iyo indha madoobaad.
Esh calaa qiyaasag buugaas inaad akhriso
@ Said Abshir